आरम्भ चौतारी र उन्नति सहकार्य लघुवित्तको शेयरमूल्य समायोजन
चैत १८, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले बुधवार आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था र उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बोनस शेयरको मूल्य समायोजन गरेको छ ।
यी दुई ओटै कम्पनीले लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ बुधवार बुकक्लोज गरेसँगै नेप्सेले शेयरमूल्य समायोजन गरेको हो ।
नेप्सेले आरम्भ चौतारी लघुवित्तको ८ दशमलव ८५ प्रतिशत बोनस शेयरको समायोजन पछि शेयरमूल्य रू. १ हजार ५२५ तोकेको छ । नेप्सेले अघिल्लो कारोबारको दिन अर्थात् मंगलवार कायम अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार ६६० को आधारमा शेयरमूल्य समायोजन गरेको हो ।
कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई ८ दशमलव ८५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने भएको छ । उक्त लाभांश पारित गर्नका लागि कम्पनीले आगामी चैत ३१ गते पाँचौ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सभा पञ्चकन्या बैंक्वेट काभ्रेपलाञ्चोकमा बिहान ११ बजे शुरु हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, नेप्सेले उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १७ दशमलव ८१ प्रतिशत बोनस शेयरको समायोजन पछि शेयरमूल्य रू. २ हजार ३१७ तोकेको छ । कम्पनीको मंगलवार रू. २ हजार ७३० मा अन्तिम कारोबार भएको थियो ।
कम्पनीले १७ दशमलव ८१ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने भएको छ । उक्त लाभांश पारित गर्न कम्पनीले छैठौं वार्षिक साधारण सभा चैत ३१ गते बोलाएको छ । सो सभा होटल पौवा, भैरहवामा बिहान १०:३० बजे शुरु हुनेछ ।